EGO KPATARA EGO KPATARA - World March
Home » Noticias » Pịa Ihe edeturu » EGO NA-EKWU EGO
28 / 03 / 2020 15 / 03 / 2020 site Antonio Gancedo
Kedụ ka mmadụ ga-esi kwuo maka udo ebe a na-ewu ngwa ọgụ ndị na-egbu egbu ma ọ bụ na-akpa oke ikpa oke?
"Olee otu anyi ga - esi kwuo banyere udo ebe anyị na - ekepụta ngwa agha ndị agha dị egwu?
Kedụ ka anyị ga-esi kwuo maka udo ebe anyị na-ekwupụta ịkpa oke na ịkpọasị?
Udo bụ naanị ụda nke okwu, ọ bụrụ na esiteghị n'eziokwu, ọ bụrụ na e wuliteghi ya dịka ikpe nkwụmọtọ si dị, ọ bụrụ na e jirighi ya kwado ya ma zuo ya, ọ bụrụkwa na achọpụtaghị ya na nnwere onwe. "
(Pope Francis, okwu na Hiroshima, Nọvemba 2019).
Na mbido afọ, okwu nke Francis na-eduga anyị ịtụgharị uche n’etiti ndị Kristianụ banyere nkwa anyị na-eme kwa ụbọchị maka iwulite udo n’ụwa anyị bi na ya na ezigbo mmekọrịta anyị: Galicia.
Ọ bụ eziokwu na anyị bi n’ebe e nwere ihe ùgwù n’ihu ọtụtụ nde mmadụ nọ n’ụwa. Agbanyeghị, udo a pụtara ìhè na-adị nkọ ma nwee ike ịgbaji oge ọ bụla.
Ọkara nke ndị Galịja na-adị ndụ na uru ọha: penshion na enyemaka (Olu nke Galicia 26-11-2019).
Ihe omume na nso nso a na Chile, otu n'ime mba ndị kachasị nwee ọganihu na South America, na-adọ aka ná ntị banyere adịghị ike nke ọha mmadụ akpọrọ ọdịmma.
Ihe ike nwoke na nwanyị n’afọ a siri ike na ala anyị, ịtụ ndị ọbịa, ịkpa agwa na okwu ịkpọasị ụfọdụ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọbụladị n’okpuru nchebe nke okpukpe ndị Kristian, bụ ihe ama na-egosi na udo adịbeghị nkwụsi ike.
G CANN CAN KA ANY CON GA-EZI?
Iji me ka e nwee udo nke udo, odi nkpa ka ndi niile gbakotara n’otu ndi mmadu tinye aka na oru udo nke ha. Ọ dịghị mfe imeri esemokwu, ime ka ihe na-emegiderịta onwe gị, ihe ndị na-eme mgbanwe na-adịghị ele mmadụ anya n'ihu.
Isi ego bu nkuzi udo diri ezi na ulo ma obu site na ulo akwukwo, ebe nsogbu nke mmegbu na mmegbu na-etolite kwa afo.
Muta umuaka na umu nwoke na nsogbu esemokwu n’enweghi asusu na enweghi aghara bu okwu di n’ihu.
Otu n'ime ihe na-akpata enweghi ọgba aghara n'ọtụtụ mba bụ hyperconsumption nke ọ dị
mikpuru nke ụwa. Ọ bụghị naanị maka mmebi nke ihe mmadụ mebiri emebi nke oke oke, kama ọ bụ oke na ịda ogbenye na ịbụ ohu nke nde mmadụ.
Akpata agha dị n'Africa bụ nnukwu uru azụmahịa, na ire, ire ahịa na ire ahịa. Spain abụghị ihe ọhụrụ maka ọnọdụ a. UN adịghịkwa, ebe ọ bụ na 80% nke ire ngwa ahịa sitere na mba ndị so na Council Security United Nations.
Mmefu ego nke ụwa na ngwa agha (2018) bụ nke kachasị elu n'ime afọ iri atọ gara aga (ijeri euro 30).
Pope Francis abịawo n’aka UN site na ikike ikike imegharị onwe ya na Security Council nke ike ise na-apụ n'anya.
Ya mere, anyị ga-agbanye ụgwọ maka ọrụ dị mma ma na-eche echiche, na-ewepụ uru na-adịghị mkpa, masịrị azụmahịa gburugburu ebe obibi na ike na-adigide. Naanị otu a ka anyị ga-esi kwụsị mbibi ụwa na ime ihe ike sitere na mmepụta anụ ọhịa n'ọtụtụ mba.
Nzuko Nzuko nke Amazon n’oge na-adịbeghị anya, emere na Ọktọba gara aga na Rome, kpọrọ oku maka iwu ọhụrụ nke na-agbachitere mpaghara ndị ahụ dị egwu na ndị bi na ha.
Site n'okwukwe anyị n’ime Jizọs napụta anyị, anyị enweghị ike ịkwụsị ịlụ ọgụ na mbọ a ịchekwa okike.
Peeji nke abụọ nke abụọ POLA PUP PUP PUKU PII
N’ọnwa Ọktọba 2, n’afọ 2019, ụbọchị nke abụọ n’abia maka udo na oke ọgbaghara bidoro na Madrid, bụ nke na-achọ ngbako nke uwa niile na mmegharị ọfụma maka ebumnuche ndị a:
Kwado Nkwekọrịta Ngwakọta Ngwakọta nke Nuclear ma si otú a wepu ohere nke ọdachi zuru ụwa ọnụ site na itinye ego ya na mkpa nke mmadụ.
Wepu agu na uwa.
Gbanwee UN ka ọ bụrụ ezigbo World Council maka Udo.
Mezue Nkwupụta nke Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na Akwụkwọ Ozi Maka Mgbasa Ọchịchị Ọchịchị.
Mee atụmatụ nke ị ga - egbochi imegide supremacism na ịkpa oke ọ bụla nke sitere na agbụrụ, mba, mmekọahụ ma ọ bụ okpukperechi.
Na-edozi mgbanwe ihu igwe.
Na-akwalite NWAANY NNU NA NWA NIILE ka mkparịta ụka na ịdị n'otu bụ ike mgbanwe na - emegide ụtụ isi na agha.
Ihe dị taa, mba 80 bịanyere aka na njedebe nke ngwa agha nuklia, mmadụ iri atọ na atọ kwetara ma 33 ka ga-aka. Bọchị ikpe gwụrụ na Madrid na Machị 17, 8, na ụbọchị ndị nwanyị mba ụwa.
Ugbu a, onye ọ bụla nwere aka ha isonye na mmụọ nke ịdị nsọ a na-aga n'ụwa niile.
O zughị ezu ịhụ Chineke n'anya ma ghara ife arụsị, o zughị ezu ịghara igbu, izu ohi ma ọ bụ ịgba akaebe ụgha.
N’ọnwa ndị na-adịbeghị anya anyị ahụla ka etu ime ihe ike siri jupụta n’ọtụtụ ebe n’ụwa: Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia, Spain, France, Hong Kong… pathzọ nke mkparịta ụka na udo bụ ọrụ dị mkpa chọrọ anyị niile.
"Na Nagasaki na Hiroshima m nọ na-ekpe ekpere, ahụrụ m ụfọdụ ndị lanarịrịnụ na ndị ikwu nke ndị ahụ metụtara ma kwughachi nkwenye siri ike nke ngwa agha nuklia na ihu abụọ nke ikwu okwu banyere udo, iwu na ire ngwa ọgụ (...) E nwere mba ndị Kraịst, mba ndị Europe ndị na-ekwu maka udo wee bie ndụ site na ogwe aka ”(Pope Francis)
EGO PEACE 2019/20
Mbinye aka: Onye nhazi Crentes Galeg @ s